Ibali le-Ciara's Secret Sex Ishintsho yi-Hoax
I-Archive yeNgcaciso yeeNkohlakalo kunye nokulahlwa kweCiara Ukuba nguTransgender
I-imeyile ehanjisiweyo ejikelezayo ukususela ekuqaleni kuka-2005 ithi i-hip-hop / i-R & B inkwenkwezi uCiara wazalwa yindoda kwaye mhlawumbi utyhilwa okanye uqhutywe umsebenzi wokutshintshana ngesondo ukuba abe ngumntu osinileyo . Akunjalo, kunjalo, kuyinyaniso; kodwa zama ukuxelela ukuba kwi-intanethi.
Inkcazelo: Intetho ye-intanethi / i-Hoax / i-Spoof
Ukujikeleza ukususela ngo- 2005 (kule fomu)
Umzekelo weRuara Transgender Rumor
Umbhalo we-imeyile unikezelwe nguRyan C., ngoMatshi 10, 2005:
UCiara utyhila iinjongo zakhe
NguNolan Strong, allhiphop.com
"Ndisisitabane." Lawa ngamazwi okurekhoda umculi uCiara wathetha ngoLwesithathu ebusuku ukuba ababukeli bezigidi kwi-BET 106 kunye nePaki kwi-event setting setting for the television.
"Ukuphuma" kukaCiara njengomlingani wesithandana kwakuza kunzima. Kodwa ukuba kufuneka ukuba avume ukuba nguye ngokwenene kumabonwakude kazwelonke, kubangelwa ukubhiyozela phakathi kwabantu abathandanayo nabasetyhini. Akukho mculi omkhulu we-pop owake waphuma njengomntu osasazelayo kubabukeli emva kokuba sele ekhulule i-albhamu.
I-imeyile iyaqhubeka, icaphuna i-Sean Combs kunye ne-RuPaul ngesihloko, kunye nohlalutyo lwimo yabantu bendoda kunye nabagqwetha kwiindawo zase- hip hop .
Uhlalutyo lwe-Email ye-Ciara Transgender
Kukho iinguqu ezininzi zeendlebe ezijikelezayo. Okokuqala, inqaku elikhankanyiweyo alizange libonwe kwiziko leendaba ze-hip-hop apho kuthiwa yi-ALLHIPHOP.com. Ingqungquthela yesingulu, umbhali ongaziwa, ejikeleza nge-imeyili ukususela ekuqaleni kuka-2005.
I-disavowal ethunyelwe kwisayithi kungekudala emva kokuba i-spoof ingene kwi-circulation efundiwe ngale ndlela:
Ukuba kwenzeka ukuba ufunde ukuba u-AHH u-Nolan Strong wabhala ibali malunga noCiara ukuba ngu-trannie yena, akakholelwa. Asizange sibhale, kodwa umntu uzama ukudala kunye namahemuhemu. U-Ciara u-alllllll wesifazane, umntwana!
Ngokwenene, i-rumor ye-Ciara-is-hermaphrodite isele ikhutshwe njenge "idiza" yi-ALLHIPHOP.com inyanga ngaphambili:
Sisoloko sifumana amahlebezi athi uCiara, u-Queen of Crunk-NB, wazalwa enezifo zesini kunye namabhinqa. Asinayo i-CLUE apho le ngxabano ephosakeleyo iqalile, kodwa ayiyinyani ngokuqinisekileyo njengoko siyazi. Sicinga ukuba wayeseklabhu ephosa iindloko zincinci kakhulu kwaye abanye bafuna ukuqala le. Okanye mhlawumbi yilezo zinto zibhekiselele, kodwa ngolwazi lwethu, unendawo eyodwa yendawo yabucala. Ngelishwa, andiyi kubona. I-rumor ineemilenze ezintle nangona ingafi naliphi na ixesha kungekudala.
Ngaba i-Ciara i-Transsexual Hermaphrodite Lesbian Transvestite?
Kungakhathaliseki naziphi na izizathu, amahlebezi abuza ubulili bukaCiara kunye / okanye ukuqhelana ngesondo kuqhutyelwe ukususela ngo-2004. Enye ingoma ithi umculi "waphuma" njengengqingili kwi- Oprah Winfrey Show , nangona ngo-2005 wayengakaze avele kwi-Oprah. Enye inguqu ithi uCaiara ngokwenene u-hermaphrodite ("omnye onezitho zesini kunye neendlela ezininzi zesini zesibini kunye nabesetyhini," njengoko kuchazwe yi- American Heritage Dictionary ). Kanti omnye uthi ungumntu osasazekayo (indoda edityayo kwimpahla yabasetyhini).
Omnye amabango ungumlingani wesini.
Akunakwenzeka ukuba konke kukunyaniseka, kwaye nakubakho akukho maxwebhu okubonisa ubungqina bobuxoki, akukho nabani na owakubonayo omnye wabo oyinyaniso. Enyanisweni, kuphela "ubungqina" obuye banikezwa kukuba ibango likaCiara Harris lithe laveza ithelevishini. Hogwash.
UCiara ngokwakhe wakhupha ukuphika okupapashwe kwiNew York Daily News phantsi kwesihloko esithi "Akukho Gender Gap Here":
Inzwa ye-R & B i-Ciara ifuna nje ukuba wonke umntu azi: Nguye wonke umfazi. "Uyazi into ehlekisayo? Iindumiso endandizenzayo ukuba ngumntu," wasitshela ebudeni be-Vibe Vixen eFrederick. "Bathi u-Oprah uthe kwindlela yakhe yokubonisa," wahleka. "Andizange ndibe kwi-Oprah ebomini bam - sonke siyazi ukuba ndineminyaka engaphambi kokuba ndihambe ku-Oprah, ngoko ke!"
I-10 ephezulu yeyona ndlela ixhamle kwiimpendulo zeentlobo zeeNkcazo zokuPhumela ukufa
Fumana I-Ice Hot Help
Isikhokelo soNxibelelwano Inkcazo kunye nemizekelo
Imisebenzi ephezulu yokuhlawula enokuyifumana kunye neDregree ye-intanethi
Uthini Uthando ngesiJapan?
7 Hillary Clinton Scandals kunye neengxabano
Umatshini weSlot kunye neengcamango ezingalunganga
UDionysus - isiGrike uThixo wewayini kunye neDyunken Revelry
UbuGushi Bubukhosi - I-Archeology yeSithethe seSuyiixi eTurpan
Indlela yokuba yi-Olympic Boxer
J Mascis Kicks Lou Barlow Ngaphandle kweDinosaur Jr